200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Britain oo cuna-qabateyn saareysa Somaliland, una diiday shirka London | Shabakada Warbaahinta Times
Britain oo cuna-qabateyn saareysa Somaliland, una diiday shirka London
Hargeysa (Caasimada Online) – Britain ayaa ay suurto-gal tahay inay cuna-qabateyn saarto maamulka Somaliland, sababo la xiriira dib u dhacyada doorashooyinka maamulkaas, warbixino ayaa sidaas sheegay.
Wargeyska Africa Intelligence ayaa sheegay in safiir ku xigeenka Britain ee Somalia, Andre Allen uu 27-kii Maarso Hargeysa tagay, kadib markii uu casuumad ka helay xisbiga mucaaradka ee Wadani.
Inkasta oo uu diiday inuu ka hadlo cuna-qabateynta laga yaabo inay saaraan dowladda Siilaanyo, haddana Andrew Allen ma qarin sida dowladda Britain aysan ula dhacsaneyn hab dhaqanka xukuumadda Hargeysa.
Wada-hadal uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibedda Sacad Cali Shire iyo Siilaanyo, waxa uu caddeeyey sida Britain ay uga soo horjeedo dib u dhigista lagu sameeyey doorashooyinkii Somaliland.
Waxa uu sidoo kale ku war-geliyey Somaliland inaan lagu casuumi doonin inay ka qeyb-gasho shirka London ee arrimaha Soomaaliya, oo 11-ka May dhacaya.
Sillaanyo ayaa ugu jawaabay Andrew in beesha caalamka mar walba Somaliland ku cadaadiso inay sameyso waxa ay doonaan, haddana aysan marnaba sameyn ballan-qaad la xiriira inay aqoonsanayaan madax banaanida Somaliland.
Mas’uuliyiin Somaliland ah ayaa sheegay in xukuumadda Siilaanyo ka fakareyso inay shir carqalad ku ah kan London ku qabato magaalada Edinburgh ee caasimadda Scotland, kuna beegeyso 11-ka May.
Somaliland ayaa ku dooday in dib u dhaca doorashada ay ugu wacan tahay abaaraha ka jira qeybo ka mid ah Somaliland.